Gresy " Journey-Assist - Zavatra tokony hatao. fiantsenana Kitchen. Climate. Photo
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Gresy
18 Mey 2020
Toetra fohy ahitana an'i Gresy
Taranak'i Gresy taloha i Gresy, izay ekena ho fanaka ny sivilizasiôna Andrefana rehetra!
Repoblika parlemantera miray izy io, ampahany amin'ny Vondrona Eropeana sy NATO, ary miaraka amin'izay koa ao amin'ny saikinosy Balkan sy ny nosy kely maro :). Nofafana avy amin'ny Ranomasina Aegean i atsinanana, ny Ranomasina Ionian any andrefana, i Gresy ary any atsimo atsinanan'ny Mediterane sy ny ranomasina Cretan.
Inona no atao any Gresy
Mahazo tombony lavitra noho ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao i Gresy kely. Na ny olom-pantatra tsy fantatra ao aminy aza dia afaka manao taona maro. Izay tanàna grika, na kely aza, ary any amin'ireo nosy maro dia manana tsangambato ara-tantara sy ny alàlan'ny alàlanany.
Ny Gresy ankehitriny dia tany am-boalohany ary tsy dia tsara tarehy kokoa. Afaka mampifaly ny mpizahatany amin'ny toe-javaboary subtropika mahafinaritra, tany mahafinaritra, fasika avo be, morontsiraka volkano ary vorondrano, rano madio any an-dranomasina, ny hatsaràn'ny vohitra fanjonoana, ny tsiron'ny vokatra nasionaly, lovia ary divay. Betsaka ny hotely, trano fandraisam-bahiny ary foibe SPA no mahavoky ny filan'ny vahiny rehetra.
Mirehareha hotely avo indrindra i Gresy
Manintona an'i Greece amin'ny alàlan'ny masoandro malefaka, ny ranomasina mafana ary ny nosy kanto mahafinaritra izy, izay i Rhodes, Corfu, Creta ary Santorini no malaza indrindra.
Nosy Rhodes any Gresy
Ny nosy Corfu any Gresy
Nosy Kreta any Gresy
Nosy Mykonos, Gresy
Ny nosy Paros, Gresy.
Ny toetr'andro ambanin'ny tany tropikaly dia mahagaga fa mifanaraka amin'ny famirapiratan'ny natiora. Tsy aiza intsony no ahitanao ireo tanàna tsara tarehy toy izany, misy tafo mena vita amin'ny taila mena, izay mipetraka eo an-tampon'ny tendrombohitra na milevina amin'ny toerana maitso matevina. Tsy maninona izay nahatongavan'ilay mpizahatany tany Gresy - mba hahafantarany ny lovany ara-tantara na handry amoron-dranomasina fotsiny. Na ahoana na ahoana, eto dia afaka mahita izay tiany ny tsirairay.
Monasiteran'ny Melfior. Gresy
Teatra an'ny Dionysus. Gresy
Ny hafanana isan'andro amin'ny Gresy
Ny mari-pana any Gresy mandritra ny volana maromaro.
Famandrihana any Gresy. Amin'ny volana.
Greece dia manana toetr'andro tropikaly any Mediterane, miavaka amin'ny fahavaratra main-tany sy ny ririnina malefaka. Ny isan'ny andro mazàna dia 300 hatramin'ny 310 isan-taona.
Rahoviana no fotoana tsara indrindra handehananao any Gresy
Ny tontolon'ny sary mahafinaritra indrindra dia hita amin'ny volana aprily sy mey, rehefa mamony sy mivadika maintso ny zava-drehetra. Ireny volana ireny no volana tsara indrindra hitsidihana ireo toerana manan-tantara ao amin'ny firenena. Volana jona no volana tsara indrindra amin'ny hetsika any ivelany sy ny filomanosana amin'ny toetrandro. Ny volana mafana indrindra any Gresy dia ny volana Jolay sy Aogositra. Ny salan'isan'ny maripana mandritra an'io vanim-potoana io dia +32, ary ny salan'isan'ny rano an-dranomasina dia +28. Ny hafanana any amin'ireo nosy dia mora zaka kokoa noho ny amin'ny tanibe noho ny akaiky ny ranomasina, izay misy rivotra mahery mamelombelona.
Vanim-bidy any Gresy
Fararano volamena tany Gresy. Ny vanim-potoana Velvet
Ny volana Oktobra sy Oktobra dia mivadika ny vanimpotoana ao amin'ity firenena ity. Amin'izao vanim-potoana izao, mihena ny hafanana, fa mbola eo am-pitoniana hatrany ny fotoam-pisakafoanana. Teo anelanelan'ny volana aprily sy novambra dia matetika tsy misy rahona ny toetrandro, tsy fahita firy ny orana ary tsy maharitra, ary ny volana Jolay sy aogositra dia aseho tsy fahampian'ny rotsakorana tanteraka.
Ny vanim-potoanan'ny volory any Gresy dia vahaolana tsara hijerena ireo fahitana eto amin'ny firenena
Weather in Greece now + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Gresy. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana any Gresy
Ho fanampin'ny akanjo volony sy ny volom-borona, any Gresy, ny mpizahatany dia manana fahafahana mividy lafo vidy raitra sy entana vita amin'ny hoditra (anisan'izany ny kiraro) manana kalitao avo lenta.
Ao Gresy, maro no mandamina fitsangatsanganana fehiloha manokana volom-borona
Na eto amin'ity firenena ity aza dia mamokatra karazana firavaka volamena sy volafotsy be kalitao izy ireo.
Firavaka volamena sy volafotsy
Ho an'ireo mpankafy ny fahagola, be dia be ny fivarotana mivarotra zavatra toy izany. Ary koa amin'ny habetsahana dia misy ny tsena antsoina hoe "parasy". Raha mila fahatsiarovana tsy dia lafo loatra ianao dia afaka mividy sarivongana vita amin'ny marbra na alabastera, vazy, amboradara, dantelina ho fitadidiana.
Tsena Flea any Atena, Gresy
Ny iray amin'ireo vokatra sakafo lehibe novidina teto amin'ity firenena ity dia ny menaka oliva. Oliva sy tantely koa dia manamarika. Matetika ny mpizahatany no mividy azy ireo ho fanomezana ho an'ny namana sy fianakaviana.
Fahatsiarovana tsara - oliva isaky ny tsiro 🙂
Ny fahandro grika dia aseho amin'ny be dia be ny legioma, legioma, vokatra vita amin'ny ronono (fromazy malemy), oliva, menaka oliva, divay, mofo.
Ny hena, ny zanak'ondry sy ny akoho dia malaza indrindra, ary matetika no mihinana henan-kisoa sy hen'omby.
Any Gresy ianao dia afaka manandrana salady grika tena azo antoka, octopus, moussaka (casserole vita amin'ny hena voadinika, voatabia ary atody), pasticio (karazana lasagna grika), stifado (henan-kena sy voankazo miaraka amin'ny divay sy voanio. ), zava-bita manokana (saosisy misy dipoavatra sy voatabia vaovao), paidakia (akoho amam-bary mifangaro).
Salady grika tena izy ihany no azo tsiro any Gresy.
Casserole Greek - Moussaka
Ny kaserôla iray hafa dia i Pasticio. Zavatra mitovy amin'ny lasagna
Stifado - henan'omby voahandro miaraka amin'ny legioma
Ny reharehan'ny firenena Gresy dia fromazy. Ny faritra tsirairay dia mirehareha isan-karazany.
Feta Cheese any Kreta, Gresy
Baklava sy galactobureko dia zava-mamy malaza. Ny lovia farany dia ny mofomamy puff nofenoina crème. Na any Gresy aza dia misy divay matsiro sy zava-pisotro misy alikaola mahery kokoa - ouzo (anise vodka) sy rakia.
Baklava grika (Baklava)
Milk Pie Galactobureko
Any amin'ny tanànan'ny Grika, ny trano fisakafoanana isan-karazany, trano fivarotana pasta, barbecue, trano fisotroana kafe, tazomaly, bara, ranom-boankazo ary pub dia na aiza na aiza. Misy trano fisakafoanana manolotra sakafo vaovao Greek sy iraisam-pirenena koa. Mandritra izany fotoana izany, ny ampahany amin'izy ireo dia matanjaka, afaka mampifaly mpandeha noana.
Any Gresy, tsy misy olana amin'ny filana sakafo na sakafo 🙂
Ny loza ateraky ny Gresy
Firenena ambany tahan'ny heloka bevava i Gresy, fa ny fitandremana mitombina ihany koa dia hanampy eto. Ilaina ny mampiasa trano fisotroana hotely rehefa mitahiry ireo zavatra sarobidy indrindra. Ny fifanakalozam-bola dia tokony hatao amin'ny birao fifanakalozana mijanona sy banky ihany fa tsy amin'ny arabe. Ao amin'ny bazaar dia mila manafina ny kitapom-bolanao sy ny zavatra hafa ianao. Ary tokony hanana photocopy ny pasipaoronao foana ianao.
Hotely, trano fisakafoanana, fivarotana fahatsiarovana ary foto-drafitr'asa fizahan-tany hafa no manara-maso ny polisy fizahan-tany manokana, izay mila ampifandraisinao raha misy angalarina aminao, ohatra. Matetika, ny mpiasa isaky ny faritra ao amin'ny polisy toy izany dia misy manamboninahitra iray na roa miteny anglisy tena mahay, ary azon'izy ireo lazaina amin'ny olona iharan'izay antenaina izao sy izay hatao - raha halefa any amin'ny polisy mahazatra ny raharaha, na raha aleo ny mpizahatany miala sasatra ary miala sasatra kokoa, raha fantatra ny raharaham-pitsarany. fanantenana.
Ny rano avy amin'ny mains amin'ny ankamaroan'ny faritra any Gresy dia azo sotroina soa aman-tsara. Ny faningana dia ny zoro sy vohitra "vao" tena. Soso-kevitra ny hijery amin'ny mponina ao an-toerana raha mampidi-doza ny misotro rano amin'ny paompy eto.
Mba hidiran'ny fiangonana na monasitera dia mila akanjo maotina ianao izay nanidy ny soroka. Vehivavy manao kapa, pataloha na miniskirt tsy mahazo miditra ao amin'ny tempoly.
Kaody finday: 30 +
Sehatra Internet: .gr